16.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
मीठे बच्चे– तिमीले आफ्नो जीवनको डोरी एक बाबासँग बाँधेका छौ , तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ , एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नु छ।”
संगमयुगमा आत्माले आफ्नो डोरी परमात्मासँग जोड्छ, यसको रीति-रिवाज अज्ञानमा कुन रूपले चल्दै आइरहेको छ?
विवाहको समयमा स्त्रीको पल्लव पतिसँग बाँध्छन्। स्त्रीले सम्झन्छन्– जीवनभर उनैको साथी भएर रहनु छ। तिमीले त अब आफ्नो पल्लव बाबासँग जोडेका छौ। तिमीलाई थाहा छ– हाम्रो पालना आधाकल्पको लागि बाबाद्वारा हुन्छ।
जीवन डोर तुम्ही संग बांधी......
हेर, गीतमा भन्छन्– जीवनको डोरी तिमीसँग बाँधेँ। जसरी कुनै कन्या छन्, उनले आफ्नो जीवनको डोरी पतिसँग बाँध्छिन्। सम्झन्छिन्– जीवनभरि उनैको साथी भएर रहनु पर्छ। उनले नै पालन-पोषण गर्नुपर्छ। यस्तो होइन कन्याले पतिको पालन-पोषण गर्नुपर्छ। जीवनभरी पतिले पालन-पोषण गर्नुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि जीवनको डोरी बाँधेका छौ। बेहदका बाबा भन, टिचर भन, गुरु भन जे भन... यो आत्माहरूको जीवनको डोरी परमात्मासँग बाँध्नु हो। त्यो हो हदको स्थूल कुरा, यो हो सूक्ष्म कुरा। कन्याको जीवनको डोरी पतिको साथमा बाँधिन्छ। उनी उनको घरमा जान्छिन्। हेर, हरेक कुरा बुझ्ने बुद्धि चाहिन्छ। कलियुगमा छ सबै आसुरी मतको कुरा। तिमीले जानेका छौ– हामीले जीवनको डोरी एकसँग बाँधेका छौं। तिम्रो सम्बन्ध एकसँग छ। एकसँग नै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ किनकि उहाँबाट हामीलाई धेरै राम्रो सुख मिल्छ। उहाँले त हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु हुन्छ। त्यसैले यस्ता बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ। यो हो रूहानी डोरी। आत्माले नै श्रीमत लिन्छ। आसुरी मत लिनाले नै तल गिरेका हौं। अब रूहानी बाबाको श्रीमतमा चल्नुपर्छ।
तिमीले जानेका छौ– हामीले आफ्नो आत्माको डोरी परमात्मासँग बाँध्छौं, त्यसैले हामीलाई उहाँबाट २१ जन्मको लागि सदा सुखको वर्सा मिल्छ। त्यस अल्पकालको जीवन डोरीबाट त तल गिर्दै आयौं। यसमा २१ जन्मको लागि ग्यारेन्टी छ। तिम्रो कमाई कति बेजोडको छ, यसमा लापर्बाही गर्नु हुँदैन। मायाले धेरै लापर्बाही गराउँछ। यी लक्ष्मी-नारायणले अवश्य कसैसँग जीवन डोरी बाँधे, जसबाट २१ जन्मको वर्सा मिल्यो। तिमी आत्माहरूको परमात्मासँग जीवन डोरी बाँधिन्छ, कल्प-कल्प। उनको त गणना नै छैन। बुद्धिमा बस्छ– हामी शिवबाबाका बनेका छौं, उहाँसँग जीवन डोरी बाँधेका छौं। हरेक कुरा बाबाले बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले जानेका छौ– कल्प पहिला पनि बाँधिएको थियो। अहिले शिवजयन्ती मनाउँछन्, तर जानेका छैनन्। शिवबाबा जो पतित-पावन हुनुहुन्छ उहाँ अवश्य संगमयुगमा नै आउनु हुन्छ। यो तिमीले जानेका छौ, दुनियाँले जान्दैन त्यसैले गायन छ– करोडौंमा कोही। आदि सनातन देवी-देवता धर्म प्राय: लोप भइसकेको छ। अरू सबै शास्त्र कथा आदि छन्। यो धर्म छँदै छैन त्यसैले कसरी जानून्। अहिले तिमीले जीवनको डोरी बाँधिरहेका छौ। आत्माहरूको परमात्मासँग डोरी जुटेको छ, यसमा शरीरको कुनै कुरा छैन। ठीकै छ घरैमा बस, बुद्धिले याद गर्नु छ। तिमी आत्माहरूको जीवन डोरी बाँधिएको छ। पल्लव बाँध्छन् नि। त्यो हो स्थूल पल्लव, यो हो आत्माको परमात्मासँग योग। भारतवर्षमा शिवजयन्ती मनाउँछन् तर उहाँ कहिले आउनु भएको थियो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। कृष्णको जयन्ती कहिले, रामको जयन्ती कहिले हो, यो जानेका छैनन्। बच्चाहरूले त्रिमूर्ति शिवजयन्ती शब्द लेख्छन् तर यस समयमा तीन मूर्तिहरू त छैनन्। तिमीले भन्छौ– शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा सृष्टि रच्नुहुन्छ त्यसैले ब्रह्मा साकार रूपमा अवश्य हुनुपर्छ। बाँकी विष्णु र शंकर यस समयमा कहाँ छन्, जसलाई तिमीले त्रिमूर्ति भन्छौ। यो धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा छ। त्रिमूर्तिको अर्थ नै ब्रह्मा-विष्णु-शंकर हो। ब्रह्माद्वारा स्थापना त यस समयमा हुन्छ। विष्णुद्वारा सत्ययुगमा पालना हुन्छ। विनाशको कार्य अन्त्यमा हुन्छ। यो आदि सनातन देवी-देवता धर्म हिन्दुहरूको एउटा मात्र धर्म हो। उनीहरू त सबै आउँछन् धर्म स्थापना गर्न। हरेकले जानेका छन्– यो धर्म स्थापना गरे र उनको सम्वत् यो हो। फलानो समयमा, फलानो धर्म स्थापना गरे। हिन्दुहरूको बारेमा कसैलाई थाहा छैन। गीता जयन्ती, शिवजयन्ती कहिले भयो, कसैलाई थाहा छैन। कृष्ण र राधाको उमेरमा २-३ वर्षको फरक हुन्छ। सत्ययुगमा अवश्य पहिला कृष्णले जन्म लिन्छन् अनि राधाले। तर सत्ययुग कहिले थियो, यो कसैलाई पनि थाहा छैन। तिमीले पनि बुझ्न धेरै वर्ष लाग्यो, त्यसैले दुई दिनमा कसैले कहाँ सम्झन्छ र! बाबाले त धेरै सहज कुरा बताउनु हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका बाबा। अवश्य उहाँबाट सबैलाई वर्सा मिल्नुपर्छ। ओ गड फादर भनेर याद गर्छन्। लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर छन्। यिनले स्वर्गमा राज्य गर्थे तर उनलाई यो वर्सा कसले दिए? अवश्य स्वर्गका रचयिताले दिनु भएको हो। तर कहिले र कसरी दिनु भयो, यो कसैले जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– सत्ययुगमा अरू कुनै धर्म थिएन। सत्ययुगमा हामी पवित्र थियौं, कलियुगमा हामी पतित छौं। त्यसैले संगममा ज्ञान दिनु भएको थियो, सत्ययुगमा होइन। त्यहाँ त प्रारब्ध हुन्छ। अवश्य पहिलाको जन्ममा ज्ञान लिएका थिए। तिमीले पनि अहिले लिइरहेका छौ। तिमीले जानेका छौ– आदि सनातन देवी-देवता धर्मको स्थापना बाबाले नै गर्नुहुन्छ। कृष्ण त सत्ययुगमा थिए, उनलाई यो प्रारब्ध कहाँबाट मिल्यो? लक्ष्मी-नारायण नै राधा-कृष्ण थिए, यो कसैले पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनैले बुझ्छन्। यो कलमी लाग्छ। अति मीठो वृक्षको कलमी लाग्छ। तिमीलाई थाहा छ– आज भन्दा ५ हजार वर्ष पहिला पनि बाबाले आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनु भएको थियो। अहिले तिमी ट्रान्सफर भइरहेका छौ। पहिला ब्राह्मण बन्नुपर्छ। बाजोली खेल्दा चोटी त अवश्य आउँछ। हामी अहिले ब्राह्मण बनेका छौं। यज्ञमा त अवश्य ब्राह्मण चाहिन्छ। यो शिव वा रुद्रको यज्ञ हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नै भनिन्छ। कृष्णले यज्ञ रचेनन्। यस रुद्र ज्ञान यज्ञबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुन्छ। यो शिवबाबाको यज्ञ पतितलाई पावन बनाउनको लागि हो। रुद्र शिवबाबा निराकार हुनुहुन्छ, उहाँले यज्ञ कसरी रच्नुहुन्छ। जबसम्म मनुष्य तनमा आउनुहुन्न। मनुष्यले नै यज्ञ रच्छन्। सूक्ष्म वा मूल वतनमा यो कुरा हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ– यो संगमयुग हो। जब लक्ष्मी-नारायणको राज्य थियो तब सत्ययुग थियो। अब फेरि तिमी यी बनिरहेका छौ। आत्माहरूको जीवनको यो डोरी परमात्मासँग छ। यो जीवनको डोरी किन बाँधेका हौ? सदा सुखको वर्सा पाउनको लागि। तिमीलाई थाहा छ– बेहदका बाबाद्वारा हामी यी लक्ष्मी-नारायण बन्छौं। बाबाले सम्झाउनु भएको छ– तिमी नै देवी-देवता धर्मका थियौ। तिम्रो राज्य थियो। पछि तिमी पुनर्जन्म लिंदा-लिंदा क्षत्रिय धर्ममा आयौ। सूर्यवंशी राजाई गयो, फेरि चन्द्रवंशी आए। तिमीलाई थाहा छ– हामीले कसरी यो चक्कर लगाउँछौं। यति-यति जन्म लियौं। भगवानुवाच– हे प्यारा बच्चाहरू! तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ, मैले जान्दछु। अहिले यस समयमा यस तनमा दुई मूर्ति छन्। ब्रह्माको आत्मा र शिव परम आत्मा। यस समयमा दुई मूर्तिसँग-सँगै छन्– ब्रह्मा र शिव। शंकर त कहिल्यै पनि पार्टमा आउँदैनन्। बाँकी विष्णु सत्ययुगमा हुन्छन्। अहिले तिमी ब्राह्मणबाट देवता बन्छौ। ‘हम सो’ को अर्थ वास्तवमा यो हो। उनीहरूले भन्छन्– आत्मा नै परमात्मा। परमात्मा नै आत्मा। कति फरक छ? रावण आउनासाथ रावणको मत सुरु भयो। सत्ययुगमा त यो ज्ञान प्राय: लोप हुन्छ। यो सबै हुनु ड्रामामा निश्चित छ, तब त बाबा आएर स्थापना गर्नुहुन्छ। अहिले हो संगम। बाबा भन्नुहुन्छ– म कल्प-कल्प, कल्पको संगम युगमा आएर तिमीलाई मनुष्यबाट देवता बनाउँछु। ज्ञान यज्ञ रच्छु। बाँकी सबै यस यज्ञमा स्वाहा हुनु छ। यो विनाश ज्वाला यस यज्ञबाट प्रज्वलित हुनु छ। पतित दुनियाँको त विनाश हुनु छ। नत्र पावन दुनियाँ कसरी हुन्छ? तिमीले भन्छौ– पनि हे पतित-पावन आउनुहोस्! त्यसैले पतित दुनियाँ र पावन दुनियाँसँगसँगै हुन्छ र? पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ, यसमा त खुसी हुनुपर्छ। महाभारतको लडार्इं भएको थियो, जसबाट स्वर्गको ढोका खुल्यो। भन्छन्– यो त्यही महाभारत लडाईं हो। यो त राम्रो हो, पतित दुनियाँ खतम हुन्छ। शान्तिको लागि टाउको दुखाउनु पर्ने आवश्यकता नै के छ? तिमीलाई अहिले तेस्रो नेत्र मिलेको छ, त्यो कसैको पनि छैन। तिमी बच्चाहरूलाई त खुसी हुनुपर्छ– हामीले बेहदका बाबाबाट फेरि वर्सा लिइरहेका छौं। बाबा हामीले कैंयौ पटक हजुरसँग वर्सा लिएका छौं। रावणले फेरि श्राप दियो। यो कुरा याद गर्न सहज छ। बाँकी सबै दन्त्य कथा हुन्। तिमीलाई यति धनवान बनाएँ फेरि गरिब कसरी बन्यौ? यो सबै ड्रमामा निश्चित छ। गायन पनि छ– ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। भक्तिबाट वैराग्य तब हुन्छ, जब ज्ञान मिल्छ। तिमीलाई ज्ञान मिल्यो अनि भक्तिबाट वैराग्य भयो। सारा पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य। यो त कब्रिस्तान हो। ८४ जन्मको चक्कर लगायौ। अब घरमा जानु छ। मलाई याद गर्यौ भने मेरो पासमा आउँछौ। विकर्म विनाश हुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। योग अग्निबाट पाप भस्म हुन्छ, गंगा स्नानबाट हुँदैन।
बाबा भन्नुहुन्छ– मायाले तिमीलाई मूर्ख (फुल) बनाइदिएको छ, अप्रिल फुल भन्छन्– नि। अहिले म तिमीलाई लक्ष्मी-नारायण जस्तो बनाउन आएको छु। चित्र त धेरै राम्रा छन्– आज हामी के छौं, भोलि हामी के हुन्छौं? तर माया कम छैन। मायाले डोरी बाँध्न दिदैन। खिचातानी हुन्छ। हामीले बाबालाई याद गर्छौं फेरि थाहा छैन के हुन्छ? बिर्सिन्छौं। यसमा मेहनत छ त्यसैले भारतवर्षको योग प्रख्यात छ। उनीहरूलाई वर्सा कसले दियो, यो कसैले बुझ्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! म तिमीलाई फेरि वर्सा दिन आएको छु। यो त बाबाको काम हो। यतिबेला सबै नर्कवासी छन्। तिमी खुसी भइरहेका छौ। यहाँ कोही आएर बुझे भने खुसी हुन्छन्, भन्नेछन् अवश्य ठीक हो। ८४ जन्मको हिसाब हो। बाबाबाट वर्सा लिनु छ। बाबालाई थाहा छ– आधाकल्प भक्ति गरेर तिमी थाकिसकेका छौ। मीठे बच्चे– बाबाले तिम्रो सबै थकाइ मेटाइदिनुहुन्छ। अब भक्ति अँध्यारो मार्ग पूरा हुन्छ। कहाँ यो दु:खधाम, कहाँ त्यो सुखधाम। म दु:खधामलाई सुखधाम बनाउन कल्पको संगमयुगमा आउँछु। बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाले बेहदको वर्सा दिनुहुन्छ। एकको नै महिमा हो। शिवबाबा नआएको भए तिमीलाई पावन कसले बनाउँथ्यो? सारा कुरा ड्रामामा निश्चित छ। कल्प-कल्प तिमीले मलाई पुकार्छौ– हे पतित-पावन आउनुहोस्! शिवको जयन्ती हुन्छ। भन्छन्– ब्रह्माले स्वर्गको स्थापना गरे, फेरि शिवले के गरे जसकारण शिवको जयन्ती मनाउँछन्? केही पनि बुझ्दैनन्। तिम्रो बुद्धिमा ज्ञान राम्ररी बस्नुपर्छ। एकको साथमा डोरी बाँधेका छौ त्यसैले फेरि अरूको साथमा नबाँध। नत्र गिर्छौ। पारलौकिक बाबा अति साधारण हुनुहुन्छ। कुनै बडप्पन छैन। लौकिक पिताहरू त मोटरमा, हवाईजहाजमा घुम्छन्। बेहदका बाबाले त भन्नुहुन्छ– म पतित दुनियाँ, पतित शरीरमा बच्चाहरूको सेवाको लागि आएको छु। तिमीले बोलाएका थियौ– हे अविनाशी सर्जन आउनुहोस्, आएर हामीलाई इन्जेक्शन लगाउनुहोस्। इन्जेक्शन लागिरहेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ– योग लगाऊ अनि तिम्रा पाप भस्म हुन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ नै ६३ जन्मका दु:ख-हर्ता, २१ जन्मका सुख-कर्ता। अच्छा!
१) आफ्नो बुद्धिको डोरी एक बाबासँग बाँध्नु छ। उहाँ एकको श्रीमतमा चल्नु छ।
२) हामीले मीठो वृक्षको कलमी लगाइरहेका छौं त्यसैले पहिला स्वयं धेरै मीठो बन्नु छ। यादको यात्रामा तत्पर रहेर विकर्म विनाश गर्नु छ।
सबै खजानाहरूलाई विश्व कल्याणप्रति प्रयोग गर्ने सिद्धि स्वरूप भव
जसरी आफ्नो हदको प्रवृत्तिमा, आफ्नो हदको स्वभाव-संस्कारको प्रवृत्तिमा धेरै समय लगाउँछौ, तर आ-आफ्नो प्रवृत्तिबाट पर अर्थात् उपराम रहने गर। हर संकल्प, बोली, कर्म र सम्बन्ध-सम्पर्कमा सन्तुलन राख्यौ भने सर्व खजानाको बचतद्वारा कम खर्च बालानशीन बन्छौ। अब समय रूपी खजाना, इनर्जीको खजाना र स्थूल खजानामा कम खर्च बालानशीन बन। यिनलाई स्वयंको सट्टा विश्व कल्याण प्रति यूज गर्यौ भने सिद्धि स्वरूप बन्छौ।
एकको लगनमा सदा मगन रह्यौ भने निर्विघ्न बन्छौ।